Qoor-qoor gacan kuma haayo magaalada Hobyo | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-qoor gacan kuma haayo magaalada Hobyo
Magaalada xeebeedka muhiimka ah ee Hobyo, ayaa u muuqata mid ka baxday gacanta Qoorqoor, kadib maamul-xumo iyo maleeshiyaad beeleed is-biirsaday oo ka jira magaalada.
HOBYO, Soomaaliya – Guud ahaan bulshada Galmudug, ayaa indhaha ku heya xaaladda cakiran ee maanta ka taagan maagalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, hayeeshee, arin kale, oo shacabku si weyn uga cabanayo ayaa ka taagan degmo xeebeedka Hobyo, oo maamul iyo nidaam dowladeed oo ka taliya aan lahayn.
Qoorqoor, kaliya kuma fashilmin hoggaaminta maamulka iyo ka shaqeynta siyaasadda Galmudug, hayeeshee, wuxuu sidoo kale, ku guuldarreysatay gacan ku heynta degmooyinka, taas oo keentay in Maleeshiyaad hubeysan ay labadii maalin ee na-weydaartay hortaagnaayeen, howlihii shaqo ee degmada qaddiimiga ah ee Hobyo.
Sida ay xaqiijiyeen dadka degaanka, maleeshiyaad hubeesan oo magaalada kasoo jeeda ayaa hakiyay howlihii shaqo ee ka socday dekadda, kadib markii ay sheegeen in ay waayeen lacag ay ka rabeen doon badeeco sidda oo dekedda macmalka ah ku soo xiratay todobaadkaan.
Ganacsato kasoo jeedda Galmudug, oo doonto u rarneyd, ayaa diiday in ay wax lacag oo sharci darro ah bixiyaan taas oo keentay in guud ahaan maleeshiyaadku albaabada isku dhiftaan dekedda.
Inksta oo maanta qeyb ka mid ah badeecadii ay doontu watay la dajiyay, kadib waan waan muddo soo socotay, ayay hadana wararku sheegayaan in Maleeshiyaadku ay wali gacanta ku hayan dekadda, kuwaas oo lacag baad ah ka qaada ganacsatada Galmudug ee dekadda adeegsada.
Hobyo, oo la rumeysan yahay in ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Galmudug, ayaa heysan maamul ka shaqeeyay amnigeeda, waxayna gacan ku heynteeda ku hardamaya siyaasiyiin doonaya in ay ku gorgortamaan.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye, (Qoorqoor) wuxuu u muuqdaa hoggaan ku fashilmay howlihii loo igmaday, isla-markaana aan hir-galin nidaam iyo maamul taabba-gala, ku dhawaad labada sano uu joojo xaafiiska ugu sarreeya Galmudug.